ဖူးနုသစ်: ဘာစားရရင် ကောင်းမှာလဲ
စင်ကာပူကို စရောက်ကတည်းက တစ်ခုခုတော့ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းနေတယ်လို့ ခံစားရတာက အစားအသောက် တွေရဲ့ အရသာပါပဲ။ စင်ကာပူမှာ ရတဲ့ အစားအသောက် တွေက ဆီနည်းပါတယ်။ အငန် နည်းပါတယ်။ အချိုမှုန့် နည်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တခါတလေတော့ အရသာ ရှိတာ မှန်သမျှ အကုန် နည်းနေသလား လို့ တောင် တွေးမိပါတယ်။
အစောပိုင်း အတွေးခေါင် မိတာကတော့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ကများ အစားအသောက် တွေကို ဆီတွေ ဆားတွေ အချိုမှုန့်တွေ ပိုပိုသာသာ ထည့်ရင် ဒဏ်ရိုက်မယ်လို့ ညွှန်ကြား ထားသလား ဆိုပြီးတော့ပါ။ အမှန်တကယ်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးကွက်ရဲ့ သဘောအရ သူ့နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်တိုင်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် ပုံစံကို ကြိုက်နေလို့ အစားအသောက်တွေ ဒီလို အရသာ ဖြစ်နေရတယ် ဆိုတာကို နောက်တော့ သဘောပေါက် လာပါတယ်။
ကျွန်တော် အရင်ရုံးမှာတုန်းက နေ့ခင်းဘက် ထမင်းစား ထွက်ရင် ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေနဲ့ အတူ အပြင်ထွက်ပြီး စားဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ထမင်းစားချိန် ဆိုရင် အရသာ ရှိတဲ့ အစားအစာမျိုး ကို ရွေးပြီး စားလေ့ ရှိပါတယ်။ ပထမနေ့ ဒန်ပေါက်စားလိုက်၊ နောက်တစ်နေ့ ကြက်သားဟင်းကို ယိုးဒယားလို အုန်းနို့နဲ့ ချက်ထားတာလေး စားလိုက်၊ နောက်တစ်နေ့ ဆီရွှဲရွှဲလေးနဲ့ ကြော်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် စားလိုက်၊ နောက်တစ်နေ့ အနောက်တိုင်း ပုံစံ ကြော်ထားတဲ့ ကြက်သားအပြားနဲ့ အာလူးကြော်လေး စားလိုက် လုပ်နေတော့ နေ့လည်စာ အတူ ထွက်စားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေက မျက်ခုံးပင့်ကြပါတယ်။ မင်းစားတဲ့ အစားအစာတွေက ကိုလက်စထရော တွေ၊ အဆီဓာတ်တွေ အရမ်းများတယ် ရောဂါဖြစ်မှာ မကြောက်ဖူးလား လို့ မေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က နေ့လည်စာလေး စားတာ ၊ ဒီလောက်နဲ့တော့ ဘာမှ ဖြစ်လောက်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရောပေါ့ လို့ ပြန်ပြောမိ ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်က ကျန်းမာရေး ဆိုတာ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အကြောင်း၊ သူဆိုရင် အဲဒီလို ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာမျိုးကို တခါတရံမှသာ စားတဲ့ အကြောင်း တရားဟော ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက် စားဖို့ တရားဟောတယ် ဆိုတာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က အဖွားအိမ် သွားရင် အဖွားက ပန်းကန်တစ်ခုလုံးနီးနီး ဆီမြုပ်လု နီးပါး ဆမ်းထားတဲ့ လက်ဖက်သုပ်မျိုး၊ ဆီရွှဲနစ် နေအောင် ချက်ထားတဲ့ ဟင်းမျိုး ကျွေးတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖိုး ဆရာဝန်က ဆီများလို့ ဆိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူး။ မစားနဲ့လို့ ။ တစ်ခါမှ မပြောဖူး ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ အငန်လျှော့စားတို့ အချိုမှုန့် လျှော့ထည့်တို့လည်း ပြောလေ့ ပြောထ မရှိပါဘူး။ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆိုရင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေဖို့၊ မနက်ခင်း အိပ်ရာက နိုးရင် ရေတစ်ခွက် အဝသောက်ဖို့ ဆိုတာမျိုးတွေပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ အဖိုးရော အဖွားရော နှစ်ယောက်စလုံး အသက် ၉၀ ကျော်အောင် နေသွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာ စားမှ အသက်ရှည်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ လက်ခံရမှာ နည်းနည်း ခက်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စလုံး မိတ်ဆွေများကတော့ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အတော် ဂရုစိုက် ကြတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ အရင်တုန်းက စင်ကာပူမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောဘွန်ဝမ်းက သူ့မိန့်ခွန်း တစ်ခုမှာ ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက် စားဖို့ ပြောခဲ့ဖူး ပါတယ်။ သူဆိုရင် ချာကွေးတျောင်လို အစားအသောက်မျိုးကို တစ်နှစ် မှာ ၃ခါလောက်ပဲ စားတဲ့ အကြောင်း ပြောတာပါ။ ချာကွေးတျောင်ဆိုတာက ကွေးတျောင် ဆိုတဲ့ ခေါက်ဆွဲအပြားကို ဆီရွှဲရွှဲ နဲ့ ခရု၊ ကြက်ဥ စတာမျိုးတွေ ထည့်ပြီး ကြော်ထားတာပါ။ စလုံးမှာ ရှိတဲ့ သူတိုင်း သူ့လို တစ်နှစ်မှ ၃ ခါပဲ စားတယ် ဆိုရင်တော့ စင်ကာပူမှာ ချာကွေးတျောင် ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
တစ်ခါက စလုံး အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်နဲ့ မလေးရှားကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အတူသွားဖြစ် ကြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဘာစားမလဲ ရွေးကြရင်း သူကတော့ ဆိတ်သား စွတ်ပြုတ်နဲ့ ပေါင်မုန့်ကို မှာပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဝမ်းသာအားရနဲ့ "ဒါမျိုး စင်ကာပူမှာ နေရာတကာ မရတော့ဘူးကွ။ ရရင်လည်း ဒီလောက် အရသာ မကောင်းဘူး။" လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတော့ "ဒီ ဆိတ်စွပ်ပြုတ်က အရသာ ရှိပေမယ့် ကိုလက်စထရော များတယ်။ အဲဒါကြောင့် စလုံးမှာ သိပ်မသောက် ကြဘူး။ လူတွေက သိပ်မသောက်ကြတော့ ဆိုင်တွေကလည်း မရောင်းကြတော့ဘူးပေါ့ကွာ။" လို့ ပြောပါတယ်။ ဘောဂဗေဒ သဘောအရ ဝယ်လိုအား ရှိမှ ရောင်းလိုအားက ရှိမှာ ဆိုတော့လည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တဲ့ သူတွေကြား ကိုလက်စထရောများတဲ့ အစားအသောက် သွားရောင်းတာ သီလရှင်ကျောင်းကို ဘီးနဲ့မှန် သွားရောင်းသလို ပါပဲ။
ကျွန်တော့်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် စားဖို့ တရားဟောတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က တစ်နေ့တော့ ပြောပါတယ်။ ငါ ဒီနှစ် ဆေးသွားစစ်တာ အဆီက မနှစ်ကထက် ပိုနေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာ ဘာစားသလဲ ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တယ်။ ငါမနက်တိုင်း စားတဲ့ ကြာဇံကြော်က အဆီတွေ များနေတယ်။ နောက်ကို ကြာဇံကြော် နေ့တိုင်းမစားမှ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီးတော့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာပြောရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူ့လို အစားအသောက်ကို ဒီလောက် ဆင်ခြင်တဲ့သူတောင် ဒီလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်လို အစားအသောက် သောင်းကျန်းတဲ့သူ ဆိုရင် ဘယ်နား သွားနေရမလဲ မသိတော့ပါဘူး။
ပျော်ပျော်နေသေခဲ မော်တော်နေရေထဲ ဆိုသလို ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ တွေ့တဲ့ အစားအသောက်ပဲ ခါတိုင်းလို ဆက်စားရမလား။ ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျမှ နောက်တ မရအောင် အခုကတည်းက အစားအသောက် ရှောင်ရမလား ဇဝေဇဝါနဲ့ တွေးရင်း အဲဒီနေ့ နေ့လည်စာ အတွက်တော့ အုန်းနို့များများ ဆီရွှဲရွှဲနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ကြက်သားဟင်း တစ်ခွက်ပဲ မှာစားလိုက်မိပါတော့တယ်။
Posted by ZT at 1:23 AM
hahahaha...don't worry about that bro... unless you have very few amount of physical exerciseaday, it shouldn't beaproblem. And I think itsamyth but things only happen to them who worry all the time. "ပျော်ပျော်နေသေခဲ မော်တော်နေရေထဲ" this saying is absolutely right :D
က်ေနာ္ကေတာ့ ဟင္းခ်ိဳမွဳန္႔ အရသာကို မၾကိဳက္ပါဘူး..။
က်န္းမာေရးအရ မဟုတ္ပဲ..ငယ္ကတည္းက အေမက အိမ္မွာ ခ်က္မစားေတာ့ အက်င့္ျဖစ္ေနပါတယ္..။
ကိုယ့္ အၾကိဳက္ ခပ္ေပါ့ေပါ့သာ ၾကိဳက္ပါတယ္..။
ဟိုတခါ ဇက္တီ မေလးသြားတုန္းက စားခဲ့တဲ့ ဆိုင္က အစာေတြ အခုထိ မွတ္မိေနပါတယ္..။
and from what i understand, as long as you take what is needed for you, it won't effect your health. as Buddha has taught about "Karma and its consequences", it will only affect you if you follow after your sensations excessively.3good mealsaday won't be much ofaproblem i think :D
and it could also be noticed that all tropical regions have regional foods and fruits that are naturally high in fats. So, Singapore also has tropical climate and so it would be acceptable to have some food which are high in fat :P
but don't take fast food: they really make us get fat. i took Mc'D for2months consequently as it is the only nearest place to where i am working for my internship and now i am gaining weight :D
က်ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကုလားဆိုင္က curry ဟင္းရည္ကို စြပ္ျပဳပ္လို႔ ေသာက္တာ ျမင္ရင္ သတ္ေတာင္ ေသသြားမလား မသိဘူး :D
Shyam -> Thanks for you advices (or encouragement :D )
မေပါက္ -> စင္ကာပူ လာလည္ရင္ လိုက္ေကြ်းပါ့မယ္။ :)
ကိုေမာင္သန္႕ -> curry ကို စြပ္ျပဳတ္လိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မေသာက္ႏိုင္ဘူး။ ဟားဟား။